जर्मनीको भिसा भारतीयहरूका लागि - ALinks
जर्मनी, जर्मनी को संघीय गणतन्त्र को रूप मा परिचित। यो छ व्यापक यसको कम बेरोजगारी दर र धेरै फाँटमा ओ कामको कमीको लागि परिचित। जर्मन सरकारले बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न कडा नियमहरू लगाएको छ। तिनीहरूले कडा नियम र धेरै अध्यागमन नियमहरु लगाएको छ। यी नियमहरु को धेरै परिचय छन् एक जो Schengen क्षेत्र को माध्यम मा यसको क्षेत्र मा सामिल हुन को लागी। यी नियम र नीतिहरू सबै शेन्जेन सदस्य राज्यहरूमा परिचित छन्।
यद्यपि त्यहाँ केही देशहरूको कोटी र नागरिकहरू छन् जुन जर्मनीमा भिसामुक्त हुनको लागि भाग्यशाली छ। यस बाहेक त्यहाँ केहि बासिन्दाहरु पनि छन् जो मापदण्डमा पुगेका छन्। यी नागरिकहरूले भिसा अनुमति प्राप्त गर्न अन्तर्वार्तामा जान आवश्यक छ। यो भिसा अनुमतिले उनीहरुलाई पश्चिमी यूरोपको देशमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेछ।
भारतीयहरूले जर्मनी भिसाका लागि कसरी आवेदन दिन सक्छन्?
भारतीय मानिसहरू शेन्जेन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आउने आगन्तुकहरूको बीचमा रहन्छन्। तिनीहरू पनि एक छ थोरै धेरै भिसा भन्दा जर्मन भिसाको उच्च माग। त्यहाँ १,1,324२1 बिलियन दक्षिण एसियाली देशहरू छन्, जसमध्ये करीव १ लाखले २०१ 2017 मा मात्र यूरोप भ्रमण गरेका थिए। करीव एक सय fifty fifty,००० नौ सय साठी जनाले जर्मन भिसाका लागि आवेदन दिए. जर्मनी पहिलो वा एकमात्र देश थियो जुन उनीहरू युरोपमा भ्रमण गर्ने इच्छा राख्दथे।
केहि केसहरूमा भारतीय नागरिकहरू पनि यसलाई चुनौतीपूर्णसँग सामना गर्छन् प्राप्त गर्नुहोस् जर्मनीको भिसा। तिनीहरू कहिलेकाँही सही जानकारी प्राप्त गर्न असफल भए सन्दर्भमा "जर्मनी को लागी भिसा।" अनुप्रयोग प्रक्रिया र धेरै कागजातहरू कहिले काँही व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुन्छ।
जर्मनीका लागि भिसा शुल्क
आवेदक भिसा अन्तर्वार्तामा भाग लिनु अघि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। भिसा शुल्क आवश्यक तपाइँको जर्मन भिसा प्रशोधन गर्न। तपाईंको भिसा आवेदन को लागी एक महत्वपूर्ण शर्त शुल्क भुक्तान हो। जर्मनीका लागि तपाईको भिसा शुल्कको लागत तपाईले निवेदन दिँदै गरेको भिसा फारममा निर्भर गर्दछ।
जर्मन छोटो प्रवास भिसा श्रेणी रु
एयरपोर्ट ट्रान्जिट भिसा रु 6,972.56
-6-१२ वर्ष बीचका बच्चाहरू रु 3,485.66
छोटो प्रवास भिसा (वयस्क) रु 6,972.56
आर्मेनिया, अजरबैजान र रसियाका नागरिकहरू। रु 3050.50
बच्चाहरू6बर्ष भन्दा कम उमेरका हुन्छन्। मुक्त
जर्मनीका लागि भिसा आवेदन आवश्यकताहरू
जर्मन भिसा आवेदन धेरै सरल छ, धेरै जसो प्रक्रिया अनलाइन बनाइएको छ। जर्मन भिसाका लागि आवेदन दिनु अघि तपाईले केही कागजातहरू पूर्ण गर्नु पर्छ। यी कागजातहरू तपाईंको भिसा आवेदन सहित सबमिट गर्न आवश्यक छ। साथै, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाइँका सबै कागजातहरू एक अपोइन्टमेन्ट निर्धारित गर्नु अघि पूरा गर्नुहोस्। भारतबाट आवेदन गर्दा, तपाईं नजिक नजिकको जर्मन दूतावास वा वाणिज्य दूतावास मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। छोटो अवधि वा Schengen भिसा मार्फत, तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ बहु देशहरू। तर, जर्मनी त्यो देश हो जहाँ तपाईं कुनै पनि अन्य देश देखि लामो रहन आवश्यक छ। आवेदकले श Sc्गन भिसाका लागि पनि आवेदन दिन सक्छन यदि उनीहरू भ्रमण गर्न जान्छन् बहु देशहरूमा। यदि त्यहाँ छैन पर्याप्त दिन बीचको भिन्नता, तपाइँ यसका लागि शेन्जेन भिसाका लागि पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा उनीहरूले निर्दिष्ट गर्नु पर्छ कि जर्मनी शेन्जेन कन्ट्रीमा प्रवेश गर्ने पहिलो बन्दरगाह हो। जर्मन दूतावास वा कागजातले आवश्यक कागजातहरूको सूची तपाईले निवेदन दिँदै गरेको भिसाको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। सूची भिसा भिसा भन्दा फरक हुन सक्छ। यो दूतावास संग एक पटक पुष्टि गर्न राम्रो हुन्छ। यहाँ आवश्यक कागजातहरूको सूची छ।
आवेदन फारम भर्नुहोस्।
आवेदकहरूले अनलाइन आवेदन फारम भर्नु सुरु गर्नु पर्छ। तिनीहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट फारम डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। आवेदकहरूले यो फारम सहि पूर्ण गर्नु पर्छ। साथै, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफैंले प्रविष्ट गर्नुभएको सबै जानकारीहरू सत्य छन्। ठूला अक्षरहरू राख्न सल्लाह दिइन्छ, त्यसैले हस्तलेखन समस्यामा पर्दैन।
पहिलो पटक शेन्जेन भिसा आवेदकहरूले दूतावासमा गएर अपोइन्टमेन्ट गर्नु पर्छ। आवेदकले दूतावास जानु पर्छ र सबै आवश्यक कागजातहरू र आवेदन फारम हस्तान्तरण गर्नु पर्छ। अन्य अवस्थाहरूमा आवेदकले स्क्यान गरिएको कागजातहरू मेल मार्फत हस्तान्तरण गर्न सक्दछन्। तिनीहरूले आफ्ना कागजातहरू दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा पनि पेश गर्न सक्दछन्।
जर्मनीको लागि शेन्जेन भिसाका लागि आवेदन दिन तपाईंको राहदानी कम्तिमा the महिनाको मिति भन्दा पहिले मान्य हुनुपर्दछ। आवेदकहरूले आफ्नो राहदानी नविकरण गर्नु आवश्यक छ यदि तिनीहरूको राहदानी यस अवधिमा समाप्त हुँदैछ।
फोटोग्राफको लागि आवश्यकता
आवेदकहरूले आवेदन फारम अनुसार दुई छविहरू पेश गर्नु पर्छ। साथै, तपाईंको फोटो पछिल्लो हुन आवश्यक छ र तीन महिना भन्दा पुरानो हुनेछैन। विचारहरू निश्चित सर्तहरूमा लागू हुनुपर्दछ जुन तपाईंले यहाँ पाउनुभयो!
आवेदकहरूले जर्मनीमा बुक गरिएको र भुक्तानी गरेको आवासको प्रमाण प्रदान गर्नु आवश्यक छ। तिनीहरूले होटल आरक्षण पेस गर्न सक्दछ यदि तिनीहरू व्यापारको कामको लागि जाँदैछन्। सबै अन्य कागजातहरूको साथसाथै उनीहरूले यो दूतावास / वाणिज्य दूतावासमा पनि बुझाउनु पर्छ।
तर, यदि तपाइँ साथीहरू / आफन्तहरूसँग बस्नुहुन्छ भने, उनीहरूको आईडी र राहदानीको प्रतिलिपि बुझाउनु अनिवार्य छ। साथै, तपाईंले केहि अन्य कागजातहरू पनि पेश गर्नु आवश्यक छ जुन उनीहरूले तपाईंलाई उनीहरूको घरमा बस्न मद्दत गर्छन्।
यदि जर्मनी भ्रमणको लागि तपाईंको उद्देश्य पर्यटन / फुर्सत हो भने, तपाईंले तपाईंको विस्तृत इटर्नेरियलको प्रतिलिपि पनि बुझाउनु पर्छ।
आवेदकहरूले कम्तिमा अन्तिम तीन महिनाको लागि आफ्नो बैंक स्टेटमेन्टको एक प्रतिलिपि बुझाउनु पर्छ। बैंकबाट तपाईंको वित्तीय अवस्थाको लिखित विवरण अनिवार्य छ।
यदि तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तृतीयक स्कूलमा नामांकनको प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक छ - तपाईंको यात्रा अनुमतिको लागि तोकिएको अधिकारपत्रबाट औपचारिक पत्र।
यदि तपाइँ एक कामदार व्यक्ति हुनुहुन्छ र जर्मनी भ्रमणका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले केहि अन्य कागजातहरू प्रदान गर्नु पर्छ। तिनीहरूले एउटा नोट बुझाउनु पर्छ कि तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई उस अवधिको लागि वार्षिक बिदा लिन स्वीकृति दिन्छ।
यदि आवेदकको आफ्नै कम्पनी छ भने, त्यसो भए उनीहरूले सबै आधिकारिक कागजहरू पठाउनु पर्छ। स्वरोजगार आवेदकहरूले निम्न कागजातहरू प्रदान गर्न सक्दछन्।
CK1 रेजिष्ट्रेसन पेपर्स / VAT पञ्जीकरण को एक प्रति
नाम र व्यापार गतिविधिहरूको प्रमाण।
अन्य आईटमहरूमा, नाबालिगहरूले उनीहरूको जन्म जन्म प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ।
नाबालिगहरूले उनीहरूको अभिभावकको सहमति बुझाउनु पर्छ, आवेदन फारममा हस्ताक्षर द्वारा प्रतिनिधित्व। साथै, औपचारिक पत्रको सराहना गरियो यदि तिनीहरू एक्लै यात्रा गरिरहेका छन्।
यदि आमा बुबा को एक उनीहरु संग यात्रा, दुबै आमा बुबा को सहमति आवश्यक छ।
जर्मनीको भिसा आवेदन प्रक्रिया
चरण १: भिसाका लागि तपाईको आवेदनको योजना बनाउनुहोस्
आवेदन फारम पूरा गर्नुहोस् र यसलाई हस्ताक्षर गर्नुहोस्। आवेदनको लागि आवेदन गर्नु अघि सबै कागजातहरू स collect्कलन गर्नुहोस्।
कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पूर्ण फारम भर्नुभयो। साथै, कृपया प्रिन्ट गर्नुहोस्, हस्ताक्षर गर्नुहोस्, र दूतावासमा तपाईंको अन्तर्वार्ताको उपस्थितिमा तपाईंको भिसा अपोइन्टमेन्ट आफूसँगै लैजानुहोस्। यसले हस्तलिखित फार्महरूमा विचार गर्दैन।
चरण २-अपोइन्टमेन्ट गर्ने
जर्मन भिसाको लागि तपाइँको कागजपत्र लागू गर्न अनुप्रयोग केन्द्रमा जानु भन्दा पहिले तपाइँले अपोइन्टमेन्ट आरक्षित गर्नुपर्नेछ। सबै भिसा आवेदनहरू मात्र स्वीकृत हुन्छन् यदि तपाईंले अघिल्लो अपोइन्टमेन्ट गर्नुभयो।
चरण:: अनुप्रयोगको केन्द्रमा जानुहोस्
आवेदकको नियुक्ति पत्र तपाईको आवेदन केन्द्रमा आइपुगे पछि जाँच हुन्छ। पछि, तपाइँ तपाइँको पालो को लागी एक टोकन प्रदान गरीन्छ। कृपया तपाइँको अपोइन्टमेन्टको लागि आवेदन केन्द्रमा समयमै पुग्नुहोस्। यदि तपाईं १० मिनेट भन्दा बढि ढिलो हुनुहुन्छ भने, दूतावासले तपाईंको भिसा आवेदन प्रक्रिया गर्दैन। आवेदकहरूले तपाईंको नियुक्ति अर्को समयको लागि पुनः अनुसूचित गर्नु आवश्यक छ।
चरण - भिसा आवेदनहरूको सबमिशन
सामान्यतया, पेश प्रक्रिया पूरा हुन १० मिनेट लाग्छ। तिनीहरूले तपाइँको कागजात र भिसा आवेदन फारम खोजी र मान्य गर्नेछ।
यदि भिसा आवेदन फारम अपूर्ण छ भने, तपाईंको आवेदन अस्वीकृत हुनेछ। तपाईंको आवेदन अस्वीकृत गर्नका लागि त्यहाँ अन्य कारणहरू पनि हुन सक्दछन्। तपाईंले आवश्यक क्रम अनुसार कागजात व्यवस्थित नगरेको हुन सक्छ। यदि तपाईंले कागजातहरूको सबै सही फोटोकपीहरू दिनुभएन भने यो पनि अस्वीकृत हुन सक्छ। तपाईंले अर्को टोकन स to्कलन गर्न आवश्यक छ।
चरण--बायोमेट्रिक डेटाको संग्रह
एकपटक आवेदन पूरा भए पछि बायोमेट्रिक्स जानकारी हुनेछ। भिसा केन्द्र अधिकारीहरु तपाइँको जानकारी छिटो प्रक्रिया प्रयोग गरी लिन्छन्। यसले डिजिटल फिंगर स्क्यानर प्रयोग गरी १०-अंकको फिंगरप्रिन्ट स्क्यान संकलन गर्दछ। आवेदक प्रति, यसले सामान्यतया 10-7 मिनेट लिन सक्दछ।
बधाई छ, तपाइँको भिसा आवेदन प्रक्रिया अब सकियो। यस अनुरोधलाई अर्को वाणिज्य दिनमा प्रोसेसिंगका लागि वाणिज्य दूतावास वा दूतावासमा पठाइनेछ। यो तपाईको राहदानी जम्मा गर्न को लागी आवश्यक छ, भुक्तानी रसिद राख्न निश्चित गर्नुहोस्।
कृपया सचेत रहनुहोस् कि नियुक्तिहरू राष्ट्रिय भिसाको लागि निःशुल्क हो। तपाईं नियुक्ति पुष्टिकरणको साथ मात्र एक आधिकारिक VFS सेवा शुल्क चलानी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। VFS ले तपाईंलाई शुल्क रसिद प्रदान गर्दछ। आधिकारिक दूतावास वा वाणिज्य दूतावास भिसा शुल्क केवल तपाईंको VFS वा दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा नियुक्ति भएको दिनमा भुक्तानयोग्य हुनेछ। VFS र दूतावास वा वाणिज्य दूतावास खर्चको लागि, तपाईं आधिकारिक रसिदहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
अग्रिम शुल्क लिने कुनै पनि "कपटी संगठन वा संस्था" को बारे मा सचेत रहनुहोस्। तिनिहरूले VF ग्लोबल वा दूतावासका लागि अपोइन्टमेन्ट लिन तपाईबाट शुल्क लिन सक्दछन्। कुनै "अन्य संस्था वा संगठनहरू" दुबै दूतावास वा वाणिज्य दूतावास वा वीएफएस ग्लोबलसँग सहकार्य गरिरहेका छैनन्। बैठकहरूको व्यवस्था गर्नका लागि हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले VFS ग्लोबल वेबसाइट वा सम्पर्क केन्द्र भ्रमण गर्नुहोस्।
दूतावासले भेटघाट सजीलै लग हुँदैन।
जर्मनी भारतीयहरूका लागि भिसाजर्मनीको आवेदन प्रक्रियाभारतीयजर्मनीका लागि भिसा आवेदन आवश्यकताहरूजर्मनीका लागि भिसा शुल्क
केन्या भिसा भारतीयहरूको लागि
युक्रेन बाट भिसा मुक्त देशहरु
उज्बेकिस्तान राहदानी भिसा मुक्त देशहरू
पाकिस्तानका लागि भिसा मुक्त देशहरू
जुन 23, 2021
थाइल्यान्डका लागि भिसा मुक्त देशहरू